Burma Strange News (Burmese Version): ပုဂံသူရဲကောင်း ငထွေးရူး အသက်ကြီးသောအခါ ဘုန်းကြီးဝတ်ခဲ့ကြောင်း အထောက်အထားတွေ့ပြီ
ပုဂံသူရဲကောင်း ငထွေးရူး အသက်ကြီးသောအခါ ဘုန်းကြီးဝတ်ခဲ့ကြောင်း အထောက်အထားတွေ့ပြီ
ကျန်စစ်သား၊ ငထွေရူး၊ ငလုံးလက်ဖယ်၊ ညောင်ဦးဖီး ဟု ထင်ရှားသည့် ပုဂံသူရဲကောင်း လေးဦးအနက်မှ ထန်းတက် သူရဲကောင်းကြီး ငထွေရူး အသက်ကြီးသောအခါ ဘုန်းကြီး ၀တ်ခဲ့ကြောင်း အထောက်အထား တွေ့ရှိပြီ ဖြစ်သည်။
ကျောက်ဆည်မြို့နယ်ရှိ တမုတ်ရွှေဂူကြီး ဘုရားရင်ပြင်ခင်းရန် ပြင်ဆင်ရာမှဘုရားနှင့် ကိုက်တစ်ရာအကွာ မြေအောက်လေးပေအနက် ခန့်တွင် အရိုးအိုးနှစ်လုံးနှင့် ထန်းတက် သမားသုံး သံတိုသံစများ ထည့်ထားသည့် အိုးတစ်လုံးကို တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
"အရိုးရဲ့ လတ်ဆတ်မှုနဲ့ အိုးပုံစံကိုကြည့်ပြီး ပုဂံခေတ်ဦးလောက် ကလို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ မူလက အရိုးအိုး မြှုပ်တဲ့စေတီ အဖြစ်ရှိရာကနေ အနော်ရထာ လက်ထက်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ စေတီ ဂူဘုရားတစ်ဆူ ထပ်တည်ထား တာပါ။ စေတီနားမှာ မြှုပ်ထားတဲ့အိုးဖြစ်တဲ့အတွက် ဘုန်းကြီးအရိုးအိုး ဖြစ်ပါတယ်။" ဟုမြန်မာမှုဗိသုကာနှင့် ရှေးဟောင်း သုတေသန ပညာရှင် တဦးက ပြောသည်။
အရိုးအိုးများမှာ အမြင့် ၁၀ လက်မ၊ အ၀ ၁၀ လက်မရှိ အရွယ်နှင့် အမြင့် ခြောက်လက်မ၊ အ၀ ခြောက်လက်မ အရွယ်ရှိ နှုတ်ခမ်းလန် အိုးများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အရိုးအိုးများနှင့်အတူ စေတီပတ်လည်တွင် တူးဖော်ရရှိခဲ့သော သံတိုသံစများမှာ ထန်းသမားသုံးပစ္စည်းများ ဖြစ်ပြီး ပုဂံခေတ် ထန်းတက် သူရဲကောင်းကြီး ငထွေရူးမှ တပါး အခြား မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်မှ ဖြစ်ဖွယ် မရှိကြောင်း၊ ငထွေရူး၏ ထန်းတက်သမားသုံး ပစ္စည်းများနှင့် ဘုန်းကြီး အရိုးအိုး ယှဉ်တွဲ မြုပ်နှံမှုကို တွေ့ရသည့် အတွက် ငထွေရူး အသက်ကြီးသောအခါ ဘုန်းကြီးဝတ်ခဲ့သည်မှာ သေချာကြောင်း အဆိုပါ ပညာရှင်ကြီးက ဖြည့်စွက် ပြောကြားသွားသည်။
Posted by BS News at 12:16 AM
TITAN February 20, 2011 at 1:05 AM
Anonymous February 20, 2011 at 1:39 AM
right! Win Mg,aMyanmar scholar whose comments were quoted in the original news, is reallyasout yuu......
"အရိုးရဲ့ လတ်ဆတ်မှုနဲ့ အိုးပုံစံကိုကြည့်ပြီးကိုးရာစု ပုဂံခေတ်ဦးလောက် ကလို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။မူလက အရိုးအိုးမြှုပ်တဲ့စေတီ အဖြစ်ရှိရာကနေ အနော်ရထာ လက်ထက်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ စေတီ ဂူဘုရားတစ်ဆူ ထပ်တည်ထား တာပါ။
Win Maung said: read here: http://www.myanmar.mmtimes.com/2011/upper/505/upper02.htmlHow does he know that the pagoda was built by Anawrahta without any evidence????
This is not good enough evidence. It may belong to another palm-tree climber. That scholar needs to show firm evidence
Than Aye February 20, 2011 at 1:54 PM
All the posts in this blog are "satires" (not real news but making jokes) pointing out the awkwardness in the real News that are actually happening in Myanmar. The main idea of the above post is to point out the issue of "evidence" that is in need to prove the archaeological concepts. Many Myanmar scholars are talking without concrete evidences and local medias are quoating them without analysis.... In the actual news (in MM times), the so-called scholar emphasized about "Pyu" without enough evidence & it is funny according to historical point of view.... So, this "Satire" is makingajoke on so-called scholars...